Gamtaan Medrek Muudamuun Kaabineewwanii Faallaa Heera Itiyoopiyaa ti jedhe
Roobii, Guraandhalaa 10, 2016 Local time: 03:29
Muummicha ministeeraa sadii Qabaachuun Heera Itiyoopiyaa keessa taa'ee hin jiru, kaabineewwan filatamanis fedhii paartii tokkichaa qofaa baabsu jechuun gareeleen mormituu qeeqan
WASHINGTON, DC— Torban darbe muummichi ministeeraa Itiyoopiyaa Haayilemaariam Desaaleny jijjiirraa fi muudama kaabinee isaanii beeksisanii jiran.
Akkuma kanaan kan kana dura turetti dabaluu dhaan taayitaa itti aanaa muummicha ministeeraaf namoota lama muudanii jiran. Mormitoonnis heera biyyattii 75ffaa irra taa’ee kan jiru muummichi ministeeraa tokkichi qofaan jiraachuu seera jedhu faallessa.
Gamtaan Medrekis aangoo qooddannaan madaala isaa kan eege mitii akkaataan kaabineewwan kun itti muudamanis faallaa heeraa ti jechuun ibsa baasee jira. Gamtichatti bakka bu’aa WAFDO kan ta’an obbo Baqqalaa Nagaa ibsa nuuf kennanii jiran.